အမှနျတရားအတှကျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ လှတျမွောကျနယျမွမှေ အဆိုတျော ယောကီးရဲ့ လကျရှိကနျြးမာရေးအခွအေနေ – Cele Lover
အမှနျတရားအတှကျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ လှတျမွောကျနယျမွမှေ အဆိုတျော ယောကီးရဲ့ လကျရှိကနျြးမာရေးအခွအေနေ
မွနျမာ Idol အစီအစဉျတှမှော ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ရယူထားနိုငျသူတှထေဲမှာလညျး ယောကီး လညျးတဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပါတယျနျော..
အဆိုတျောယောကီးကတော့ တိုငျးရငျးသားလေးတဈယောကျလညျးဖွဈတာကွောငျ့ အပွောအဆိုလေးကလညျးပှငျ့လငျးတာကွောငျ့ အိုငျဒေါအဖှဲ့ဝငျတှကေိုယျတိုငျကလညျး ခဈြခငျပွီးစနောကျနကွေတဲ့ သူလေးဖွဈပါတယျနျော…
ယောကီးကတော့ အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးတှကေို ပိုငျဆိုငျစှာသီဆိုတတျ သူဖွဈပမေဲ့ Voting စနဈရဲ့ရှေးခယျြမှုကွောငျ့ အဆိုပွိုငျပှဲကနေ နုတျထှကျခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။
ယောကီးတဈယောကျ ပွိုငျပှဲကနေ မရှိတော့ပမေဲ့အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါကနေ ပြောကျကှယျမသှားဘဲ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့အပွငျ ပရိသတျတှနေဲ့လညျး အဆကျအသှယျမပွတျဘဲ ဆကျသှယျနသေူဖွဈပါတယျနျော..
ခုလိုဖွဈနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ အနုပညာရှငျတျောတျော မြားမြားလညျး လှတျမွောကျနယျမွမှော ရောကျရှိနကွေပွီးပွညျသူနဲ့တဈသားတညျးအာဏာရှငျကိုတျောလှနျဖို့ ကွိုးစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော.. အဲအထဲမှာ ယောကီးတဈယောကျလညျးအပါအဝငျဖွဈပါတယျ..
ခုလိုဖွဈနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ အနုပညာရှငျတျောတျော မြားမြားလညျး လှတျမွောကျနယျမွမှော ရောကျရှိနကွေပွီးပွညျသူနဲ့တဈသားတညျးအာဏာရှငျကိုတျောလှနျဖို့ ကွိုးစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော..
အဲအထဲမှာ ယောကီးတဈယောကျလညျးအပါအဝငျဖွဈပါတယျ..လှနျခဲ့တဲ့ရကျအနညျးငယျတုနျးကတော့ယောကီးက လှတျမွောကျနယျမွမှော ကနျြးမာရေးသိပျမကောငျးဘူး ဆိုပွီးဆေးပုံလေးတှနေဲ့ တငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော.. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ယောကီးက သကျသာလာပါပွီ.
လှနျခဲ့တဲ့ရကျအနညျးငယျတုနျးကတော့ယောကီးက လှတျမွောကျနယျမွမှော ကနျြးမာရေးသိပျမကောငျးဘူး ဆိုပွီးဆေးပုံလေးတှနေဲ့ တငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော..
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ယောကီးက သကျသာလာပါပွီ.. စိတျမပူပါနဲ့နျော…ဆိုပွီးပုံလေးတဈပုံတငျပွီး သူ့ရဲ့ကနျြးမာရေးနဲ့ ပကျသကျလို့ အသိပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ။
သူတငျထားတဲ့ ပို့ဈအောကျမှာတော့ ကနျြးမာလာတာ ဝမျးသာပါတယျ.. ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျဖို့ ဂရုတစိုကျနဲ့ အားပေးစကားတှေ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ယောကီးအတှကျ အားဖွဈစမေဲ့ စကားလေး တဈခုခုလောကျရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ အဆိုတော် ယောကီးရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ
မြန်မာ Idol အစီအစဉ်တွေမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူတွေထဲမှာလည်း ယောကီး လည်းတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်..
အဆိုတော်ယောကီးကတော့ တိုင်းရင်းသားလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တာကြောင့် အပြောအဆိုလေးကလည်းပွင့်လင်းတာကြောင့် အိုင်ဒေါအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်ခင်ပြီးစနောက်နေကြတဲ့ သူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်…
ယောကီးကတော့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်စွာသီဆိုတတ် သူဖြစ်ပေမဲ့ Voting စနစ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့် အဆိုပြိုင်ပွဲကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
ယောကီးတစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲကနေ မရှိတော့ပေမဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ ပျောက်ကွယ်မသွားဘဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အပြင် ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲ ဆက်သွယ်နေသူဖြစ်ပါတယ်နော်..
ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် အနုပညာရှင်တော်တော် များများလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေကြပြီးပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. အဲအထဲမှာ ယောကီးတစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်..
ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် အနုပညာရှင်တော်တော် များများလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေကြပြီးပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
အဲအထဲမှာ ယောကီးတစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်..လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကတော့ယောကီးက လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး ဆိုပြီးဆေးပုံလေးတွေနဲ့ တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ယောကီးက သက်သာလာပါပြီ.
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကတော့ယောကီးက လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး ဆိုပြီးဆေးပုံလေးတွေနဲ့ တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ယောကီးက သက်သာလာပါပြီ.. စိတ်မပူပါနဲ့နော်…ဆိုပြီးပုံလေးတစ်ပုံတင်ပြီး သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ အသိပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတင်ထားတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ကျန်းမာလာတာ ဝမ်းသာပါတယ်.. ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့ ဂရုတစိုက်နဲ့ အားပေးစကားတွေ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ယောကီးအတွက် အားဖြစ်စေမဲ့ စကားလေး တစ်ခုခုလောက်ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..
Previous Article ဒဂုံကြောငျးသား သမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျ မသဉ်ဇာဇျော ထောငျ ၁၀ နှဈ ခမြှတျခံရ
Next Article နားထောငျကောငျးလှနျးလို့ မကျြရညျပါကရြလောကျမယျ့ သီခငျြးလေးတဈပုဒျကို သီဆိုပွခဲ့တဲ့ ကိုပေါကျ